विश्वकप खेल्नु अघि विराट भन्छन ‘हाम्रो टिम धेरै राम्रो स्थितिमा रहेको छ ‘ – onlinekhelkhabar.com
पोखरा प्रिमियर लिग ( पिपिएल )
विश्वकप खेल्नु अघि विराट भन्छन ‘हाम्रो टिम धेरै राम्रो स्थितिमा रहेको छ ‘
अनलाईन खेलखबर संवाददाता	Posted on जेष्ठ ८ २०७६, बुधबार
जेठ ८ , अनलाईन खेलखबर ।। १२ औँ सस्करणको आइसीसी एकदिवसिय क्रिकेट विश्वकप नजिकिदै गर्दा विश्वकपको दाबेदार टिम भारतका कप्तान विराट कोहलीले आफ्नो टिम धेरै राम्रो स्थितिमा रहेको भन्दै विश्वकपमा राम्रो गर्ने बताएका छन ।
विश्वकप खेल्न ईङ्गल्याण्ड जानु अघि मङ्गगलबार भारतीय संचारकर्मीहरु सँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले उक्त आशय ब्यक्त गरेका हुन् । उक्त पत्रकार सम्मलेनमा उनि सगैँ टिमका मुख्य प्रशिक्षक रवि शास्त्रीले पनि आफ्ना कुराहरु राखेका थिए ।
उनका अनुसार ईङ्गल्याण्डको अबस्थामा खेल्न गाह्रो हुने भएपनि त्यसका लागि टिम तयार रहेको भन्दै विश्वकपको दबाबलाई सजिलै झेल्न टिम तयार भएको पनि बताए । यस्तै प्रशिक्षक रवि शास्त्रीले यस विश्वकपमा टिमका पूर्व सफल कप्तान तथा अनुभवी खेलाडी महेन्द्र सिह धोनीको भूमिका निकै ठुलो र महत्वपुर्ण रहको बताए ।
बिराटले थप्दै हाम्रो टिम अहिले धेरै राम्रो स्थितिमा रहेको छ । ‘हामीहरुले आईपिएलमा राम्रो गरेका छौ सबै खेलाडीहरु पनि लयमा देखिएका छन । सोही लय हामि विश्वकपमा पनि दोर्याउने छौँ । ‘
आईसीसीको मुख्य प्रतियोगितामा पिच धेरै राम्रो सँग तयार गरिएको हुन्छ । जसकारण हामीहरुले पनि खेलमा उच्च स्कोर बनाउने आशा गरेका छौ । विश्वकपमा उच्च स्कोरको खेल देख्न सकिने उनले आकलन समेत गरे ।
यता मुख्य प्रशिक्षक रवि शास्त्रीले यसपटक विश्वकपमा महेन्द्र सिह धोनी वाट ठुलो आशा र बिश्वास प्रकट गरेका छन । टिमका सफल पूर्व कप्तान तथा हाल टिममा रहेका सदस्यहरु मध्यमा धेरै अनुभवी खेलाडिको रुपमा रहेका महेन्द्र सिह धोनीलाई लिएर रवि शास्त्रीले खुलेरै प्र्शशा गरे । उनले जुनसुकै अबस्थामा खेललाई बदल्न सक्ने क्षमता राख्छन । यसकारण यसपटक पनि टिमले धोनी वाट ठुलो आशा राखेको छ ।
यस फर्माट् का लागि धोनी धेरै राम्रो गर्न सक्ने खेलाडिमा पर्छन । विशेषगरी उनले साना साना मौकालाई सदुपयोग गरेर खेललाई नै बदल्न सक्छन उनले भने । ‘ यस्तै रोहित शर्मा र शिखर धवनले पनि राम्रो लयमा रहेको भन्दै टिमले यसपटक धेरै राम्रो गर्नेमा उनि पनि पूर्ण बिश्वस्त देखिन्थे । र उनले सबैलाई हल्का रुपमा नलिएको भन्दै सुरुवाती अबस्था देखिनै टिमले आफ्नो लयमा खेल्ने बताएका थिए ।”
यता यहि आउदो ३० देखि जुलाई १४ सम्म ईङ्गल्याण्ड र वेल्समा हुन् गईरहेको आईसीसी एकदिवसीय बिश्वकपका लागि भारतीय टिम पनि निकै सन्तुलन देखिएको छ ।
यसअघि सन् १९९३ र सन् २०११ मा बिश्वकपको उपाधि उचालिसकेको भारत यसपटक तेस्रो पटक उपाधि उचाल्ने लक्ष्य सहित लामो समय देखिनै तयारि गर्दै आएको थियो र तेस्रो पटक उपाधि उचाल्ने लालाहित समेत भारत देखिएको छ । पछिल्ला प्रदशनका आधारमा पनि भारतलाई यसपटकको उपाधि उचाल्न सक्ने टिमको रुपमा पनि हेरिएको छ ।
कुल १० टिमको सहभागिता रहने विश्वकप राउण्ड रोबिन र नक्आउटको आधारमा हुनेछ । ४८ खेल हुने बिश्वकपमा भारतले भने जुन ५ मा दक्षिण अफ्रिका सँग खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ । यसपछि ८ जुनमा अस्ट्रेलियाको सामाना गर्नेछ । यस्तै तेस्रो खेलमा न्युजिल्याण्ड बिरुद् जुन १३ मा प्रतिष्पर्दा गर्नेछ । चौथोमा १६ जुनमा पाकिस्तान, २२ जूनमा अफगानिस्तान, २७ जूनमा वेस्टइंडीज, ३० जूनमा ईङ्गल्याण्ड , २ जुलाईमा बांग्लादेश र ६ जुलाईमा श्रीलंका बिरुद्द भारतले प्रतिष्पर्दा गर्नेछ ।
तियोगिताको राउण्ड रोबिन सकिएपछि यसैको आधारमा नक्आउट अर्थात सेमिफाईनलका खेल हुनेछन । पहिलो सेमिफाईनल खेल जुलाई ९ तारिखमा हुनेछ भने अर्को ११ तारिखमा हुनेछ । बिश्वकपको फाईनल जुलाई १४ मा ईङ्गल्याण्ड स्थित लॉर्ड्समा हुनेछ ।
विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह र मोहम्मद शमी।
Previous Postक्यारेबियन प्रिमियर लिगको ड्राफ्ट आज हुदै : नेपालीको नजर लण्डन तर्फ
Next Postविश्वकपका ४ यादगार फाईनल खेलहरु : जुन रोमाञ्चकपूर्ण बनेका थिए !
अफगानिस्तान माथि भारतको रोमाञ्चक जित
उपाधी दाबेदार ईङ्गल्याण्ड श्रीलंका सामु निराश : मलिंगाको उत्कृष्ट प्रदशन
सपना थियो , सोचेको थिएन : सोमपाल कामी
म भन्दा पनि सोमपाल दाईको लागि धेरै खुशी छु : सन्दिप लामिछाने
ग्लोबल टि -ट्वान्टीमा सन्दिप ठुलो रकममा दोस्रो पटक अनुबन्धित
सोमपाल पहिलो पटक विदेशी लिगमा अनुबन्धित
नेपाली राष्टीय क्रीकेट टीम तयारीमा जुट्यो
विश्वकपमा वार्नरको दोस्रो सतक
असार ६ २०७६, शुक्रबार
असार ५ २०७६, बिहीबार
© okk Media Pvt. Ltd. | 2019 All rights reserved.